Taylor Swift - Jereo izay nataonao tamiko - VipCasting.cz
Taylor Swift - Jereo izay nataonao tamiko
Do, Jereo, Made, Me, Taylor Swift, Inona, ianao
Taylor Alison Swift (* 13. Desambra 1989) diaMalagasympihira, mpamoron-kira ary mpamorona. Nihalehibe izyWyomissing v Pennsylvaniaary efatra ambin'ny folo izy no nifindra tanyNashville v Tennessee, izay nanombohany ny asany ho mpihira pop-country. Nanao sonia fifanarahana tamin'ny trano famoahana tsy miankina izyBig Machine Recordsary izy no mpihira malaza indrindra hatramin'izay nindramin'ny mpamokatraSony / ATV Music Publishing. Efa taorian'ny famoahana ny voalohanyrakitra tsy fantatra anarana (Taylor Swift) tao 2006 no nanjary kintan'ny mozikan'ny firenena. Ny singa fahatelo "Hira izahay"Nataony ilay mpihira malaza izay nanoratra tsy nanampy ary namoaka hira iray izay nalaina voalohany tao amin'ny BillboardSongs Hot Country. Nahazo nomination izyGrammy Awardao amin'ny sokajyMpanazatra vaovao tsara indrindra(Mpamorona tsara indrindra) tamin'ny taona2008.
Ny rakikira faharoaTsy Nanan-tahotradia navoaka tamin'ny faran'ny taona 2008. Miaraka amin'ny fahombiazan'ireo mpitovo "Love Story"A"Miaraka amiko ianao"Tao amin'ny tabilao no namely ilay rakikirapop crossovermpihaino ary lasa mpamokatra tsara indrindra tamin'ny taona 2009. Nahazo ny loka Grammy 4 ny lahatsaryao amin'ny 2010, izay mahatonga an'i Swift ny mpandresy Grammy tanora indrindra amin'ny rakikirain'ny taona. Ny albumany fahateloMitenena ankehitrinydia navotsotra tamin'ny faran'ny 2010 ary namidy mihoatra ny iray tapitrisa tao anatin'ny herinandro voalohany. Nandeha haingana tamin'ny fitsidihana telo ambin'ny folo volana i SwiftMiresaka izao tontolo izao, toerana nahitana kianja maromaro ary nahasarika mpankafy an-tapitrisa tamin'ny alalan'ny 1,6. Ny singa fahatelo amin'ny rakikira "midika"Naharesy roa Grammy. Ny rakikira fahefatra ao amin'ny Taylor Swift dia antsoinaRedary navoaka 22. Oktobra 2012. Pilot tokana "Tsy mbola niara-niverina izahay taloha"Lasa mpitovo voalohany izy mba hahatratra ny tampon'ny tohatratakelakaHot 100. Avaratr'i Amerika AvaratraRed Tournanomboka tamin'ny Martsa 2013. Ny sarimihetsika farany nataon'i Taylor tamin'ny 1989 dia navoaka tamin'ny faran'ny 2014 ary nanjary ny hira nahomby indrindra tao anatin'ilay rakikiraAtsaharo izany. Nahazo an'i Grammy ihany koa izy tao amin'ny "Album of the Year" sy ny "Best Vocal Album".
Ny Taylor Swift dia matetika lazaina ho "ilay fitiavan'i Amerika" ary fantatra amin'ny hira izay matetika mihira momba ny fitiavana. Ny mozika dia matetika mahakasika hira miaraka amin'ny tononkiram-pampianarana sy tononkira tsotra, izay mahatonga azy ho avy hatrany eo amin'ny fiarahamonim-bahoaka (ilay antsoina hoe "hook) Amin'ny maha mpamoron-kira azy dia nomena fikambanana izyNashville Songwriters Associationary fikambananaSongwriters Hall of Fame. eofahombiazana hafa an'ny Taylor SwiftLoka folo Grammy, FifteenAmerican Music Awards, fitoFirenena Music Association Awards, eninaAkademian'ny Loka Music Music Awardsary telo ambin'ny foloBMI Awards. Nandritra ny androm-piainany dia nividy alalana an'arivony izy tamin'ny alalan'ny 22, ary hira an-tapitrisany navoaka tamin'ny aterineto tamin'ny 50. Ankoatra ny asany mozika dia nanandrana nanao hetsika toy ny mpilalao sarimihetsika koa i Taylor Swift, izay niseho tamin'ny fizarana iray tamin'ny The Crime of Las Vegas tao amin'ny 2009, tao anaty sarimihetsikaNa sv. Andron'ny mpifankatia(2010) ary sarimihetsika an-tsaryThe Lorax(2012).Forbesdia manombana fa nahazo vola an-tapitrisa dolara izy noho ny asany tamin'ny 165. Amin'ny herintaona2013nahazo vola 40 tapitrisa dolara (efa ho 1 tapitrisa tapitrisa satro-boninahitra), izay ny ankamaroan'ny olona tao amin'ny orinasa mozika.
Taylor Swift manohana ny fampianarana momba ny fanabeazana, ny fahaizana mamaky teny sy manoratra, manampy amin'ny fiarovana ny loza voajanahary, mampiroborobo ny zon'olombelonaLGBTary fiantrana ho an'ireo ankizy marary.